Miyay Manchester United isaga hartay heshiiskii Kieran Trippier? Waxaa ka jawaabaya Fabrizio Romano – Gool FM
Miyay Manchester United isaga hartay heshiiskii Kieran Trippier? Waxaa ka jawaabaya Fabrizio Romano
Dajiye August 2, 2021
(Manchester) 02 Agoosto 2021. Suxufiga dhanka suuqa kala iibsiga lagu qaddariyo ee Fabrizio Romano ayaa shaaca ka qaaday go’aanka kooxda Manchester United kaga aadan saxiixa xiddiga reer England iyo naadiga Atletico Madrid ee Kieran Trippier.
Wararka ka imaanaya gudaha dalka England ayaa horey u sheegay in Manchester United ay ka baxday heshiiska, sababa la xiriira inay dooneyso inay ku sii heysato Diogo Dalot kooxda xilli ciyaareedka soo socda.
Suxufiga dhanka suuqa kala iibsiga lagu qaddariyo ee Fabrizio Romano ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter –ka, wuxuu ku sheegay:
“Go’aanka Manchester United ee ku aadan Kieran Trippier ayaa weli deggan.”
“Manchester United waxay u baahan tahay inay marka hore xalliso mustaqbalka Diogo Dalot, maaddaama kooxda reer England ay diyaar u tahay inay laacibka ugu fasaxdo Milan heshiis amaah ah oo ku kacaya lacag dhan 4 ilaa 5 milyan oo euro, marka lagu daro inay dooq u heysan karto inay si toos ah u iibsato.”
Warbixino ay horey u qoreen wargeysyada ayaa waxay ku sheegeen in AC Milan ay doonaysay inay yarayso lacagahaas si ay u dejiso heshiiska Diogo Dalot.
Fabrizio Romano ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay:
“Atletico Madrid kuma fikireyso inay la soo wareegto Alessandro Florenzi haddii Trippier la fasaxo.”
RASMI: Kooxda Horseed SC oo 41 sano kaddib ku guuleysatay horyaalka Somali Premier League
RASMI: Giorgio Chiellini oo heshiiska u kordhiyey Kooxdiisa Juventus… (Imise sano ayuu saxiixay?)